Abalingisi besifazane bezwe lakamuva lenoveli emnyama | Izincwadi Zamanje
Abalingisi besifazane bezwe lakubo lamanoveli amnyama
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku, Inoveli emnyama
Siphila a iminyaka yegolide yabalingiswa besifazane abakhulu okuthe noma kunjalo, bekulokhu kusezincwadini. Kepha kunjalo kuhlobo olumnyama bakutholaphi manje kwabo amazinga aphezulu okuthandwa nempumelelo. Ngakho-ke ngidlula kwezinye zalezo amagama enoveli yethu yobugebengu ikakhulukazi, yize nge ukubalulwa kwabanye abantu bakwamanye amazwe nezinto ezenzekile. Zenziwe ngababhali besilisa nabesifazane, okuhle kakhulu kuma-hackeded njengoba kulingana okufunwayo.
1.1 UJane Marple - Agatha Christie
2.1 ULisbeth Salander - uStieg Larsson
2.2 IPetra Delicado - u-Alicia Giménez-Barlett
2.3 U-Elena Blanco - uCarmen Mola
2.4 UBruna Husky - uRosa Montero
2.5 U-Antonia Scott - uJuan Gómez-Jurado
2.6 UGrace Saint Sebastian - Ana Lena Rivera
UJane Marple - Agatha Christie
Vele akunjalo. UJane Marple, lkuMiss Marple, eyakhiwe yintokazi enkulu yemfihlakalo eyayingu-Agatha Christie enye yokuqala futhi edume kakhulu protagonists zesifazane zalolu hlobo. Yebo, angamanoveli obugebengu noma ayimfihlakalo kunalokho okuchazwa njengamnyama namhlanje. Kepha kungakhathalekile ukuthi lingakanani inani lobugebengu noma amafomu alo amancanyana, ubuhlakani, ikhono nomsebenzi omuhle nguJane Marple ukuxazulula lawo macala Isebenza njalo.
Kukude lapho osebenza khona nomdashi wakho waseFrance ... ngiyaxolisa, Belgian, Hercule Poirot, iBrithani kakhulu kunetiye lehora lesi-5 futhi Yinhle ngokwengeziwe UNkk Marple.
ULisbeth Salander - uStieg Larsson
Ngaphandle kokungabaza, la hacker Owesifazane waseSweden onama-tattoos akhe, ubuhlakani bakhe nomlingiswa wakhe onganqobeki, uphawula ngaphambi nangemva ekwandeni kwabalingisi besifazane abanamandla nabanamandla kuhlobo. ULarsson uthole i- ibhalansi enhle ekudalweni kwayo nokwalowo wesilisa ophambili, intatheli UMikael Blomkvist. Yize entshontsha zonke izigcawu ezikulelo bhomu lombhalo elaliyi-saga namanje IMillenium. U-Lisbeth wadubula isibhamu sokuqala namandla akhe, umdlandla wakhe nesithombe sakhe akukaze kulinganiswe.
IPetra Delicado - u-Alicia Giménez-Barlett
UGiménez-Barlett uyi iphayona ekwakhiweni komlingiswa wesifazane ohamba phambili kuhlobo olumnyama. Umhloli wakhe wamaphoyisa uPetra Delicado, osebenza e- Barcelona, uvele okokuqala kule noveli Imikhosi yokufa de 1996.
Intekenteke imake iphuzu le- ubunzima obuhlanganiswe nokuzwela kanye nemibono, ngaphezu kobuhlalu obufihlwe ngendida. Empilweni yakhe yobungcweti unjalo impela enekhono futhi enqumayo, futhi impilo yakhe yangasese nemizwa ezimele njengokuxakeka. Ngamafuphi, a isibonelo esihle ukungena kuhlobo.
U-Elena Blanco - uCarmen Mola
El into yakamuva yezwe lakubo leveli emnyama bekulokhu kukaCarmen Mola (mbumbulu okuqhubeka nokwandisa imfihlakalo) kanye neyakhe, okwamanje, amanoveli amabili abhekene nomhloli waseMadrilenian u-Elena Blanco. Kwethulwe emphakathini ku Umakoti ongumGypsy futhi uye waqhubeka ku Inetha elibubende.
Izipikili zivuliwe izindaba ezifanele black emangelengele futhi enesihluku esenzekile muva nje kulezi zingxenye, u-Elena Blanco kungenzeka abe yi iqoqo lawo wonke ama-canon nama-cliches agcinelwe abalingiswa besilisa ama-protagonists akudala yohlobo. Unamandla esimilweni futhi uhlushwa ukunyamalala kwendodana yakhe, enokuthambekela koku ukuzibulala, yempilo eyinkimbinkimbi noma engenazwela. Futhi-ke, unqume futhi unamandla emsebenzini wakhe, futhi ngaphandle kwezakhiwo. Ilungele abafundi abafuna ukuzicwilisa kohlobo ngaphandle kwe-anesthesia noma amajakhethi empilo.
UBruna Husky - uRosa Montero
La umphenyi wesikhathi esizayo nguRosa Montero, a okuphindaphindayo kuwo wonke umthetho, owenzelwe Izinyembezi zemvula, ukuhlonipha i-sci-fi movie classic efana Blade Runner, yize ngesisekelo semibhalo endabeni yohlobo olufanayo ngu UPhilip S. Dick.
Sihlangana noHusky ku- IMadrid ka-2109 lapho inani lokufa kwabaphindayo abahlanya ngokuzumayo likhuphukile. Futhi ngaphandle kokuba kulowo mphakathi ongazinzile wesikhathi esizayo, izindinganiso ezikhona zihlala zihlala emhlabeni wonke futhi aziphelelwa yisikhathi, noma ngabe uyinto ephindaphindayo, ulaka, uzizwa ungafaneleki futhi uzithola uselangenia.
U-Antonia Scott - uJuan Gómez-Jurado
Phakathi kwalabo abafika kamuva endaweni yabesifazane abalingiswa bobugebengu besifazane abalungile sino-Antonia Scott, indalo yakamuva yombhali kulokho Indlovukazi Ebomvu. Asihambi eMadrid, kulokhu kusuka ILavapiés, lapho kuhlala khona u-Antonia, owesifazane okhetheke kakhulu one- ubuhlakani obungavamile esindise inqwaba yezimpilo, kodwa futhi elahlekelwe yikho konke. Ngakho-ke akafuni ukuphinde angene emhlabeni. Kepha uzokwenza, futhi lokho asekwenzile kube ukuhlaba umxhwele futhi axhume wonke umuntu.
UGrace Saint Sebastian - Ana Lena Rivera
Futhi omunye omusha, umphenyi wokukhwabanisa, kudalwe ngu U-Ana Lena Rivera en Yini abafileyo bathule, wenze i-niche ku-panorama yezinhlamvu ezinhle zabalingisi besifazane. Ngalesi sikhathi en indaba ehlanganisa imfihlakalo, ucwaningo nemikhuba kahle kakhulu yendawo (ikakhulukazi i-Oviedo) ehambisana nezinhlamvu zesibili ezibonakalayo kakhulu.
UGrace Saint Sebastian naye kuphawulwa ukulahleka kwengane, kuhlakaniphile, kuyabukeka futhi kuyasebenza, nomshado wakho nomndeni wakho kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke izobuya ngeziqu eziningi kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Abalingisi besifazane bezwe lakubo lamanoveli amnyama
Ephakathi kukaSepthemba I. I-jarchas ne-cantigas de amigo